Shinoa mampiseho ny fahaizany
2007-09-10 @ 16:07 in Kolontsaina
Feno ny afisin’ny fampisehoana hataona mpanakanto Shinoa sivy mianadahy tsy misy fantatry ny Malagasy loatra ny toerana natokana ho amin’izany tamin’ny herinandro lasa teo. Heverina fotsiny fa manana ny lazany ireo olona ireo araka ny naverimberina tamin’ny dokam-barotra. Mpihira sy mpanao hakingan-tanana no fahaizana manokana ananan’izy mianadahy avy ary nisy aza ny efa tompon-daka tamin’ny fifaninanana hakingan-tanana tany Monte-Carlo. Na dia tsy liana loatra aza aho ny hanatrika izany fampisehoana izany dia te-hahafantatra kosa hoe manao ahoana ny hamaroan’ny olona ho avy amin’izany fampisehoana izany. Maimai-poana manko ny fidirana ary ny Media Consulting fantatra amin’ny fikarakarana fampisehoana rahateo no nalain-dry zareo hanatontosa azy. Raha nisy vidim-pidirana manko dia mety ho sahirana ry zareo fa ny olona tsy hiditra amin’izany fampisehoana tsy misy artista tena fantatra akory.
Ny alahady hariva ary no nanaovana fampisehoana tao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Asa izay mahatadidy fa nampahatsiahy ahy ny fampisehoana hakingana sy fahaizan’ireo mpanao Cirque Sovietika nandalo teto tamin’ny andron’ny revolisiona ity tantara ity. Tamin’izany fotoana izany dia tena nihiboka tokoa ny Malagasy ka tsy tena maharaka ireo mpanakanto malaza tamin’ireny hany ka izay vahiny mandalo dia mampirohotra ny olona hijery fampisehoana mivantana. Televiziona tokana no nisy tamin’ny androny fa izao kosa efa miaina amin’ny fahamaroan’ny haino aman-jery isika. Noho izany tsy maintsy mafonja kokoa ny fampilazana ny fisiany amin’ny olona. Azo heverina fa tafita ny hafatra ka tsy mahagaga raha be no tonga na dia hizaha fotsiny aza. Fampisehoana baojo izany ve? Saingy be no diso fanantenana.
Izaho raha vao maheno hoe maimai-poana dia ny fahamaroan’ny sarambambem-bahoaka no tao tonga an-tsaina avy hatrany. Dia azo eritreretina ihany koa fa be no handalo fotsiny. Na izany na tsy izany, ho an’izay vonona ny hijery dia mila miala aloha any an-trano ka mamonjy izay toerana tsaratsara ijeren’ny tena. Mazava loatra fa tsy ho ny hira mihitsy no tena hahatongavan’ireo olona ireo. Angaha moa eto Madagasikara misy mahalala izay hira malaza misy any Shina any? Ny Shinoa manaraka ny vaovao misy any an-tanindrazany angaha no haharaka izany? Ny hakingan-tanana araka ny eritreritro no tena anton-dia afa-tsy hoe mba mahafinaritra angaha ny mihaino ny feon’ny hira. Nefa hay efa nisy ny tapakila nozaraina mialoha mba hamerana dieny mialoha ny olona ho tafiditra ao amin’ity fampisehoana ity. Iny indray no tsy hitako, hoy aho anankampo.
Raha sainina tokoa dia mety ny hevitra mba tsy hahamaty hasina ilay lapa. Tsy tafiditra izay tsy nieritreritra ny fisian’ny tapakila. Tsy ho hipoka manempotra ihany koa ao. Mampiaiky ahy ihany moa ny sasany amin’ny tsy fanajana ny lalàna mipetraka. Betsaka ny manaja ny hoe tsy azo ifohana sigara ao amin’ny lapa fa tamin’ny famaranana basket tamin’ny lalaon’ny nosy iny no nahitako fa tsy misy miraharaha izany tsy fifohana sigara izany ny maro amin’ny tanora mpifoka (sa ny mpankafy basket ihany no tena madi-doha?) no tsy mety fa asiana tongotra foana ny seza fiankinana. Amin’izay fotoana izay ihany koa dia tsy tokony hisy olona hipetraka eny amin’ny tohatra fiakarana sy fidinana ahafahana mivezivezy tsara. Mazava loatra fa tsy ho tafiditra mihitsy ny maloto akanjo isan-karazany. Misy ny lafiny mahatsara izany nefa misy ihany koa ny lafiny maharatsy azy.
Aleo aloha lazaina fa feno tsara ny lapa, mahavariana ny mijery azy amin’ny fahitalavitra hoe fampisehoana maimai-poana ve dia olona mihaja avokoa no hitanao ao? Misy tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena ihany koa manaraka izany. Ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy sy ny masoivohom-pirenena shinoa no tena fantatra amin’izany. Ny olo-tsotra malagasy tonga teny tsy nisy nanana tapakila ka tsy tafiditra hany ka maro ny tezitra. Saiky nisy mihitsy aza ny fifandonana. Tsy ny mpankafy basket aloha no maro an’isa ka tsy nisy namaky ny vavahady e! naleo nionona tamin’ny fodiana sady mbola kely rahateo ny ankizy ary na malahelo aza ireo tsy misy na inona na inona hafa azo atao ankoatra ny fanambatambazana amin’ny hanina angaha.
Na izany na tsy izany tsy ratsy tsy akory ny fampisehoana. Mahavariana aza ny karazan-kira fa mila hisy itovizana amin’ny hiran’ny taona 60 nefa mitady hisy fifandraisany amin’ny hira revolisionera ihany koa. Ny feony ihany no lazaiko fa tsy misy mahalala izay tonony any na dia mazava be aza ilay teny shinoa iresahan-dry zareo (ho an’izay mahay azy). Mahay mihira ry zareo ary hita miharihary fa anarivony taona ny sivilizasiona nodiaviny. Tsy ambaka amin’ny hira tandrefana (taloha sy klasika) ihany koa na dia izany aza fa tsy nahitako hip hop na ngadon-kira ironan’ny tanora maro kosa. Angamba kolontsaim-panoherana ireny ka tsy tiany ampitaina loatra na mety ho voarara mihitsy aza na andeha atao hoe tsy amporisihana ny fihirana azy.
Tsikaritra ihany koa fa ny petatsanga araka ny filaza no tena nameno ny toerana maro tao amin’ny fampisehoana fa ankavitsiana ihany ny Malagasy. Tsy mahagaga raha ny teny Shinoa no tena nanaovana fanolorana na dia nanao izay ho afany ihany aza i Gothlieb amin’ny fanolorana amin’ny teny malagasy. Vahiny eto amin’ny taniny indray ireo malagasy mba tafiditra tamin’io fampisehoana io. Nihevitra aho hoe maka ny fon’ny Malagasy izy ireo amin’ny fanaovana fampisehoana sahala amin’izao hay lasa karazana fihaonan’ny Shinoa rehetra indray aza no mitranga. Ie! Tena mihamaro tokoa ireto Shinoa ireto eto Madagasikara an! Hita ihany koa fa tena Be resaka ireo izay hita tao…